Saturday, 04.04.2020, 01:35am (GMT+5.5) Home Contact
Tuesday, 04.30.2019, 01:48pm
तीस वर्षे शासनकाल भनेको २०१७ सालबाट शुरू भएको निर्दलीय निरंकुश ताजपोशधारी दुइ पुस्तासम्मका राजालाई अगुवा बनाएर केही मुठ्ठीभर टाठाबाठा ठगुवा पञ्चहरूको जत्थाले रजाइ गरेको कालखण्डको शासन प्रणाली थियो । यहाँ “पञ्चहरूको जत्थाले रजाई गरेको” भन्नुको कारण के थियो भने त्यस बेलाको संविधानले दलगत परिचय दिएर संगठित भई राजनीति गर्न निषेध गरेको थियो ।
Tuesday, 04.30.2019, 01:47pm
प्रजातन्त्र भनेको जनताकोतन्त्र हो । जनताको आवश्यकता र चाहनालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने दायित्व जनप्रतिनिधिको हो । संसदमा विधेयक प्रस्तुत गर्दा पनि जनचाहना विपरीतका बिल आएमा ननता सचेत भएका मुलुकमा त्यस्ता प्रतिनिधिलाई अर्को चुनावमा वहिस्कार गर्छन् ।
अधिकारको भोक हन्तकारी नै हुँदोरहेछ - महेश्वर शर्मा
Thursday, 04.25.2019, 02:22pm
आज राज्यका हरेक तहमा बेथितिको संक्रमण बढ्दो क्रममा छ । यसमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कोही पनि छुटेका छैनन् अर्थात् सरकारका अंगहरु सबै बेलगाम छन् । प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा, प्रादेशिक सभाहरुदेखि गाउँपरिषदसम्म सबै यसमा सम्मिलित छन् । आर्थिक बेथिति बढ्दो क्रममा छ । प्रतिदिन नयाँ नयाँ काण्ड थपिंदै जाँदा पुराना काण्डहरु त्यसै छोपिदै जाँदा रहेछन् कि कुन्नि !
Thursday, 04.25.2019, 02:21pm
दोस्रो लगानी सम्मेलनले दिएको सन्देश - तारा सुवेदी
Wednesday, 04.10.2019, 11:01am
लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा वाक–प्रकाशन स्वतन्त्रता, आधारभूत मौलिक हक अधिकारको साथै आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट जनताद्वारा जनताका लागि जनताको प्रतिनिधिद्वारा देशको शासन प्रणाली संचालित हुन्छ” भन्ने आम मान्यता छ । यसैले हर एक मुलुकले लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको विरुद्ध गतिविधि गरेपनि आफू पक्षपाती रहेको देखाउने गरेका छन् । ठेठ शब्दमा भन्नु पर्दा “लोकतन्त्र” आलु हो जस्को साथ सहयोग वा उपस्थिति विना भान्छा चल्दैन ।
आफैं जान्ने बुझ्ने हुनुहुन्छ नी ! धेरै के लेखौ - महेश्वर शर्मा
Wednesday, 04.10.2019, 10:57am
प्रश्न पनि धेरै छन् । तिनको समाधान र उत्तर भाषण र ओठे जवाफबाट सम्भव छैन । जनअसन्तुष्टिको ओखती हप्कीदप्की होइन, कामै गरेर मात्र सन्तुष्टि दिन सकिन्छ । आज जनअसन्तुष्टि व्यापकरुपमा बढ्दो छ । त्यसलाई समन गर्ने–गराउने दायित्व सरकारको हो । तर सरकार जनतालाई ओठे जवाफ दिएर धम्क्याएर तह लगाउन खोज्छ भने स्वीकार्य हुन सक्दैन । पशुपति शर्माको गीतले आजको यथार्थ चित्र प्रस्तुत गरेको हो ।
Thursday, 04.04.2019, 01:30pm
धर्मको स्वाङमा अलमलिएको राजनीति - महेश्वर शर्मा
Thursday, 04.04.2019, 01:29pm
प्रतिस्पर्धा राजनीतिमा हुनैपर्ने तत्व हो भने नेतृत्वमा हुनुपर्ने तत्व चाहिं इमान्दारी र आचरणको शुद्धता हो । जति ठूलो पद उति नै ठूलो जिम्मेवारी नेताको हुन्छ । तर आजको प्रतिस्पर्धा नै ज्यादै घटिया खालको देखिएको छ । दलहरु बदनाम छन् ।
Thursday, 03.28.2019, 11:07am
हल्लामा आएको “विधेयक” माथिको “सडक बहस” - तारा सुवेदी
Thursday, 03.28.2019, 11:06am
नेपाली सेना प्रधानमन्त्रीले परिचालन गर्ने अधिकार सहितको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पास गर्ने बाटोमा अगाडि बढिरहेको समाचार आयो । नेपाली सेना जुन बेला “शाही नेपाली सेना”को रुपमा थियो– त्यसबेलासम्म राजा नै सेनाका सर्वसर्वा थिए । उनैले सेनाको सर्वोच्च परमाधिपत्य ग्रहण गरेका हुन्थे । सेना परिचालन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार राजाले प्रयोग गर्दथे ।
Monday, 03.18.2019, 04:42pm
एकीकरण अघि नेपाल ५०–५५ टुक्रामा विभाजित थियो । भारतमा ५६५ राज्य थिए । चीनमा झण्डै ६ सय राज्य थिए । जर्मनीमा १३ सय थिए भनिन्छ । यहाँ पृथ्वीनारायण शाहले टुक्रे राज्यलाई जोडेर सग्लो राष्ट्र नेपाल बनाए । अरु देशले पनि सकेसम्म विभाजित टुक्राहरु जोडे । संसारभरि नै जात र भाषाकै कारण झगडा भएर देशहरु टुक्रिएको इतिहास छ । पूर्वी यूरोपकै सोभियत संघ, युगोस्लाभिया, चेकोस्लोभाकिया, बेल्जियम नै उदाहरण छन्
Monday, 03.18.2019, 04:41pm
२०५२ फागुन १ गते ने.क.पा. माओवादीले “सशस्त्र जनयुद्ध” शुरु गरेको झण्डै २÷३ वर्षसम्म बरु संयुक्त जनमोर्चाको नेताको रुपमा २०४८ सालको निर्वाचनमा तत्कालीन संसदमा तेस्रो ठूलो दलको नेताको रुपमा बढी जनताले चिनेका डा. बाबुराम भट्टराईकै नेतृत्वमा माओवादी सशस्त्र जनविद्रोह शुरु भएको ठानेका थिए ।
Tuesday, 01.01.2019, 12:46pm
“जस्तो आफू उस्तै च्यापु” भनेझैं सबैले आफू सुहाउँदै सल्लाहकार राखेका होलान्, तर ती नसुहाउँदा सुविधा भोगिरहेका केन्द्रदेखि तल्लो तहसम्मका पदाधिकारीको सल्लाहकारका ताँतीको काम के हो र तिनका सल्लाहबाट मन्त्रीज्यू र पालिका प्रमुखज्यूहरुले के कस्ता उपलिब्ध प्राप्त गर्नुभएको छ अथवा कतै नबिक्ने भजनिया धुपौरेहरुलाई पोषिलो जागीर खुवाउन सल्लाहकार बनाएको हो, कुनै अर्थ त अवश्य होला ।
Tuesday, 01.01.2019, 12:45pm
अदालतहरुबीचको अपवित्र र अभेद्य लगन गाँठो बाँधिएको कुरा त लेखिस् । तर त्यस्तो चक्रव्यूह तोड्ने कुनै निकाय वा संविधानद्वारा स्थापित सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि हिजो जसरी राजा मातहतको “विशेष जाहेरी विभाग” थियो । उसले अदालतका फैसला प्रचलित संविधान ऐन, कानून र न्यायिक विधि प्रकृया सम्मत तरिकाले भएका छन् छैनन् र न्यायकर्ताले फैसला गर्दा इन्साफ गर्ने गर्छन् कि ? कुनै लोभानी पापानीबाट प्रभावित भई गर्छन् ?
Tuesday, 12.11.2018, 01:27pm
प्राथमिकतामा राखेर गर्नुपर्ने काम यहाँ असरल्लै छन्, त्यतापट्टि ध्यानदिने आवश्यकता सरकारले सम्झेजस्तो छैन र निरर्थक कामकुरा भने बढी नै हुने गरेका छन् । गफै सुनाएर जनतालाई रल्याउँछौं अथवा दबाएरै तह लगाउँछौं भन्ने हो भने त भकुण्डोलाई जति अँठ्याउन खोज्यो उत्ति नै उफ्रने जस्तो हुन्छ जनता पनि । विजुलीका खम्बामा टाँसेका केही पोस्टर च्यात्तैमा जनताको बिरोध साम्य हुन्छ भन्ठान्नु कमसल सोचाई हो ।
Tuesday, 12.11.2018, 01:26pm
पृथ्वीनारायण शाहले “सन् १६२८ मा लक्ष्मीनरसिंह मल्लका पालामा नै पोर्चुगलबाट नेपाल आई इसाई धर्म प्रचार गर्दै गरेका क्याथोलिक धर्मप्रचार गर्ने “जोन ग्यावरल” लगायतका पादरीहरुले अन्ततोगत्वा सनातन वैदिक हिन्दु समाजलाई प्रदूषित गर्छन् र आफ्नो धर्म मान्नेहरुको संख्या वृद्धि गर्दै कुनै दिन धार्मिक साम्प्रदायिक विद्रोह संघर्षको अन्त्यहीन क्रम शुरु गर्न सक्छन्” भनेर उपत्यकाबाट इसाईहरुलाई निष्काशनको अभियान शुरु गराए ।
चुहुने भाँडो नटालेसम्म देश उँभो लाग्दैन - महेश्वर शर्मा
Tuesday, 11.20.2018, 11:37am
नेता र मन्त्रीहरु भाषणको उछिनपाछिनमा हुन्छन् । एउटाले एकथोक भन्यो भने अर्काले अर्कोथोक भन्नैपर्छ, नत्र उभन्दा आफू कसरी जान्ने कहलाउने ? एउटाले गरेको काम राम्रै भए पनि त्यसैलाई समर्थन ग¥यो भने आफ्नो विशेषता नै के रह्यो ? यस्तै सोचाईबाट शासकहरु ग्रस्त छन् ।
Tuesday, 11.20.2018, 11:35am
हरेक कालो बादलमा दूर दिगन्ततिर, कतै न कतै चाँदीको घेरा हुन्छ, र त्यसैबाट शुरु भएर कालो बादल हट्दै जान्छ” भन्नेमा विश्वास गर्नुपर्छ । साथै जीवन भनेकै संघर्ष हो र निराशावादीता, निष्कृयता, अकर्मण्र्यता भनेको मृत्यु हो” भन्नेमा विश्वास गर्दै भागेर होइन समाज समुदाय र समग्र प्रतिकूल परिवेश विरुद्ध अवरत संघर्ष गर्नुपर्छ
Wednesday, 10.10.2018, 02:02pm
कतिपय काम नजानेर विग्रेका हुन्छन् भने कति चाहिं स्वार्थवश जानीजानी पनि भए गरेका हुन्छन् । त्यस्ता कुनै पनि विगारी काम हुन नपाउन भनेर नै प्रविधि र विज्ञानको प्रयोग गर्नुपरेको हुन्छ । नजान्नेले गल्ती गर्नु र जान्नेले गल्ती गर्नुमा फलरक भए पनि चुरोटको धुवाँले चुरोट नखानेलाई पनि असर पारे जस्तै गल्तीको दुष्परिणाम त आखिर सबैले भोग्नुपर्ने हुन्छ ।
Wednesday, 10.10.2018, 02:01pm
परम्परागत “प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली”को सोझो बाटोबाट आजसम्म परम्परावादी नेपाली काँग्रेसले जनादेशबाट शासनको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको थियो । “परम्पराको क्रमभङ्गता र क्रमभङ्गताको निरन्तरता”को परम्परावादी कम्युनिष्टहरुले पुरानो परम्परा भन्दा फरक ढङ्गको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट नयाँ शासन सत्ताका निर्णायक शक्ति बने ।
» दशैंको जमरा, दुर्गाकवच अनि मातृशक्तिको महिमा - वेदराज पन्त
» बलेको आगो ताप्नेको खाँडो जागेको छ
» किन सरकारमाथि चौतर्फी आक्रमण ?
» अबको अभियान– अभिभावकलाई रोजगारी बालबालिकालाई शिक्षा- गीता श्रेष्ठ
» नेतृत्वका दुई पक्ष– गुनिलो र गुलियो
» उही “बेथितिकै थिति”मा रम्दै गर्दा !
» पराश्रयी मनोवृत्ति र विखण्डनको झस्को
» सबल सरकार, निर्धो राज्य, गिर्दो अर्थतन्त्र !
» प्रधानमन्त्रीज्यूलाई खुलापत्र
» सरकार कस्को पक्षमा काम गर्दैछ ?
» कुराले मात्रै देश विकास हुने भए...
» भुक्तानी सन्तुलन सुधार्ने विकल्प ?
» “सार्वजनिक नीति र भ्रष्टाचार” को विश्वरुप दर्शन !
» जेठा मामाको त फाटेको धोती कान्छा मामाको के गति ?
» तीजको नाममा विकृति : हुँदा खानेहरुको लागि तीज गलपाँसो
» छोरीहरु दुलही मात्र हैनन
» सरकारका पेल्ने सुर : विपक्षको पानीआन्द्रे चाल - महेश्वर शर्मा
» ‘जंगे’ जन्माउने खेल शुरु भएकै हो ? - तारा सुवेदी
» मूल नसङ्ली धारामा सङ्लो पानी आउँदैन
» “द्वन्द्वका लागि आमन्त्रण” (?)
Page 2/21: « 1234567 ... :: »